10 kun oo Kartepe Bandhig Jiilaal ah ayaa Farxad Weyn Lahaa Karfest | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara41 Kocaeli10 kun oo Kartepe Festival Festival Jiilaal oo aad ugu faraxsan Karfest
18 / 01 / 2020 41 Kocaeli, GUUD, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
kumanaan kun oo kartipe dabaaldega karfest iyo costu
Iyada oo lala kaashanayo Dawladaha Hoose ee Magaalada Kocaeli iyo Dawladda Hoose ee Kartepe, sannadkan dabbaaldegga barafka koowaad, ee lagu qabtay Sisli Valley ee degmada Maşukiye ee degmada Kartepe, ayaa ku dhammaaday nashaadyo xiiso leh. Duqa Magaalada Kocaeli ee Magaalada Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu sidoo kale ku riyaaqay madadaalo sida muwaadinku u shaqeeyo xawaaraha shaqada. Isaga oo ku duulaya sleds, Duqa Magaalada Büyükakın wuxuu sidoo kale u qeybiyay rootiga bolseelka muwaadininta aagga Magaca caanka ah ee muusigga pop-ka, İrem Derici, wuxuu sidoo kale khudbad ka hor jeediyay riwaayadda, Madaxweynaha Koonsalka Magaalada Assoc ee Assoc. Dr. Tahir Büyükakın wuxuu yidhi, "Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aragno qof kasta oo da 'kasta leh munaasabadan."
50 kun oo qof ayaa isku hayey maalinta oo dhan
Bandhigga barafka ee Kartepe-KARFEST wuxuu albaabada u furay dadka jecel barafka markii ugu horeysay sanadkaan. Duqa Magaalada Kocaeli ee Assoc. Dr. Tahir Büyükakın, Kuxigeenada Koloeli İlyas Şeker iyo Haydar Akar, Duqa Magaalada Kartepe Mustafa Kocaman, Gudoomiyaha Xisbiga AK Ko Koloeli Mehmet Ellibeş, Gudoomiyaha Degmada Kartepe Altuğ Çağlar, Madaxweyne kuxigeenka Yaşar Çakmak, Kuxigeenka Xog hayaha Guud Hasan Aydınlık, Anti Yü Sof Xubnaha baratakoolka iyo in kabadan 50 kun oo muwaadin ayaa ka soo qeyb galay.
"HADDII UGU DAMBEEYAYNU WAA FARXAD Wanaag!"
Madaxweyne Tahir Büyükakın, oo ka soo muuqday masraxa oo u yeeray kaqeybgalayaasha goobta KARFEST, ayaa yiri, “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan aragno qof kasta oo da 'kasta oo munaasabadda ku sugan. Haddii aan sii wadno tan tan, horumarka aan ku wajahanno bartilmaameedka “City City Kocaeli” wuu sii socon doonaa. May dhacdadayada ugu horreysa ha noqoto mid wax qabad leh hawluhuna sii socon doonaan. Kartepe wuxuu noqon doonaa xarun dalxiis oo aad u qurux badan dhacdooyinkaas. ”
"KOCAELİ XUQUUQDA KASTA Waxay noqon doontaa Magaalada"
Madaxweyne Büyükakın wuxuu bixiyay ereyadan soo socda dhamaadka khudbadiisa; Waxaan fursad u helnay in aan ka qabanno mashaariic la xiriira dalxiiska degmooyinka badan. Kani waa bilow. Waqtiga soo socda, waxaan ku soo bandhigi doonaa qurxiyaheena dabiiciga ah si qurux badan badda iyo buuraha Kocaeli. Kocaeli sidoo kale waxay noqon doontaa magaalo xaflado ah. Waxay noqon doontaa magaalo wajiyada dadku ku qoslaan. Dabaaldegyadan ayaa noqon doona wax soo saar 'Happy City Kocaeli'. Kocaeli wuxuu ku guuleystay astaan ​​kale oo xaflad ah oo loo yaqaan 'KARFEST.'
KOCAMAN, "KARFEST WAA KU SAMEEYA"
Duqa magaalada Kartepe Mustafa Kocaman ayaa khudbad ka jeediyay barnaamijka. Duqa Kocaman wuxuu yiri, “Waa munaasabad ku habboon dadka gobolkayaga. Waxaan dooneynay inaan tan ku sameyno muddo dheer gobolkayaga. Aad baad u mahadsan tahay, Duqa Magaaladda. Waxaan abaabulnaa kii ugu horreeyay ee KARFEST, laakiin tani way sii socon doontaa. Kartepe wuxuu sii ahaan doonaa xarunta waxqabadka mar walba. ”
KARFEST WARMED OO KU SAARSAN İREM DERİCİ CONCERT
Waxaa loo habeeyey iyada oo lala kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli iyo Dawladda Hoose ee Kartepe, KARFEST, oo ah goobta hawlo madadaalo ah lagana muujiyo Kartepe, cinwaanka dalxiiska jiilaalka, ayaa ku dhammaaday Sisli Valley. Munaasabadda oo dhan, kumanaan muwaadin oo jecel barafka, kuwaas oo ku raaxeysanayay iyaga oo aan ka walwalayn cimilada qabow, ayaa waxaa ka buuxsamay madadaalo la leh İrem Derici, oo ah magaca caan ka ah muusikada pop. Derici, oo gabyey heesaheeda caanka ah, waxay ku guuleysatay inay kululeyso goobta.
ISKU DAYNTA DIIWAAN GELINTA 24.00
Markay KARFEST soo bandhigtay 19.00, magaca caanka ah ee muusikada pop İrem Derici ayaa bilaabay. Fannaanka caanka ah wuxuu ku heesay heesaheeda, kuwaas oo degay luuqado ay ka mid yihiin "Kalidaa oo ah Qalbigeyga Qalbigayga", "Kalluunka Bilowga ah", "Ka taxadar Guurkaaga" taageerayaasheeda. Bandhig-faneedka, halkaasoo madaddaalo ay ku qulqulayeen riwaayadda Derrem Derici, ayaa lagu sii waday munaasabado midab leh ilaa 24.00:XNUMX. Intii lagu jiray maalinta, kaqeybgalayaasha waxaa lasiiyay maraq bilaash ah, shaah, buttermilk iyo rooti bolseed.
KARFEST waxaay u furatay qaabkeeda si ay u siiso xayeysiisyada
Waxaa lagu abaabulay Sisli Valley, oo ah mid ka mid ah qaybaha ugu quruxda badan waddada shirweynaha Kartepe, ururku wuxuu caado u noqon doonaa Kocaeli iyo Kartepe sannadaha soo socda. KARFEST, halkaas oo in kabadan 50 kun oo muwaadiniin ah ay ka qeybgaleen maalintii oo dhan, kaqeybgalayaashu waxay kaqeyb galeyn baraf aad u badan oo bilaabaya barnaamijyada.
MUWAADINIINTA MAGAALADA CARUURTA
Nalalka 'Laser' wuxuu muujinayaa iftiinka habeenkii. Iyada oo ay weheliso jilitaanka tooska ah ee DJ Mert Erdoğan, ayay shacabku qoob-ka-ciyaaraya quluubtooda. Markay KARFEST soo bandhigtay 19.00, magaca caanka ah ee muusikada pop İrem Derici ayaa bilaabay. Bandhig-faneedka, halkaasoo madaddaalo ay ku qulqulayeen riwaayadda Derrem Derici, ayaa lagu sii waday munaasabado midab leh ilaa 24.00:XNUMX. Muwaadiniintu waxay ka soo baxeen Kartepe Festival Festival-KARFEST si farxad iyo reyn reyn leh, oo loo soo agaasimey iyada oo lala kaashanayo Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli iyo Dawladda Hoose ee Kartepe.
Bandhig Faneedka Kartepe-Karfest, Raaxeysiga iyo Tallaabada Adiga ayaa lagaa sugayaa
Kumanaan qof ayaa helay New Kentkart ee Akcaray
Duqa magaalada Kartepe wuxuu bixiyay bilowga adeegyada
Darawaliinta doonaya in ay tagaan Xarunta Sare ee Xarunta Ski-ga ayaa waqti adag haystay
Maalinta Sannadka Cusub ee Xarunta Ski Xarfaha
Xilliga Duufaanta Carba
Farxada barafka ee ku yaala Xarunta Ski-ga ee Kartepe
Riwaayadda Derrem Derici